Nhau - Chiitiko cheindasitiri, chikuva chekuchinjana - Jingwei Chemical Fiber ichasangana newe ku2021 Shanghai Textile Machinery Exhibition
Chiitiko cheindasitiri, chikuva chekuchinjana- Jingwei Chemical Fiber ichasangana newe pa2021 Shanghai Textile Machinery Exhibition
Kukanganiswa nedenda, iyo Shanghai Textile Machinery Exhibition yanga isipo kweanopfuura makore maviri. Iyo indasitiri matekinoroji matsva, zvishandiso zvitsva nemhinduro dzakasiyana siyana zvinofanirwa kukurumidza kuunzwa kumusika uye kuwana mhinduro yemusika; panguva imwecheteyo, mushure mekukanganiswa kwedenda iri, pane mukaha muhombe wemusika uye kuchengetedza kwenguva refu. Iko kudiwa kwekumisikidza kwave kuda kukonzerwa. The China International Textile Machinery Exhibition uye ITMA Asia Exhibition, iyo ichaitirwa muShanghai Hongqiao National Convention uye Exhibition Center kubva munaJune 12 kusvika 16, zvinonyanya kufadza. Ndeapi makuru e Suzhou Jinwei Chemical Fiber Equipment Co, Ltd.?
Totally integrated automation + IoT yekugadzirisa system mhinduro
Kuenderera mberi kuri kubuda kwehunyanzvi hutsva uye catalysis yeiyo nyowani korona chirwere, pamwe chete nepamusoro-soro kuvandudzwa kwemachira indasitiri uye kukwidziridzwa kwemaindasitiri zvinodiwa, vaisa kumberi zvitsva zvinodiwa kune smart zvishandiso. Suzhou Jinwei Chemical Fiber Equipment Co, Ltd. kuburikidza nekugadzwa uye kuita kwemafekitori edhijitari, akasanganiswa ne5G + njere dzekunyepedzera, dhata hombe uye gore komputa matekinoroji, kutenderedza kuzadzikiswa kwehungwaru hwakabatana automation control, software system kusangana, ruzivo uye mamwe matekinoroji ane machira michina uye tekinoroji yemachira Vhara kusangana uye upe akawanda mamiriro ezvinhu mhinduro dzemuno kubatsira kusimudzira kunatsiridza kwemakwikwi emaketani emakambani.
Polyester / nylon / inoumbwa nePYY kutenderera kwakakwana maitiro ekushandisa
Iyo michina inofukidza anopfuura makumi maviri akateedzana emidziyo yakakosha senge kutenderera michina, yekumhanyisa-kumhanyisa mavhiri, ma-roller rollers, nezvimwewo, uye yave ichizivikanwa zvakanyanya nevashandisi kumba nekune dzimwe nyika. Mishini yekupota ine hunhu hwekushongedzwa kwepfuma, kugadzikana kwehunhu hwechigadzirwa, mashandiro emidziyo akavimbika, kugona kukuru uye kuchengetedza simba, uye kuchengetedza kwezvakatipoteredza;
1) Rudzi rutsva rwe bimetallic screw, dhiramu, uye yakakosha pombi dhizaini inogamuchirwa.
2) Bhokisi rinoponesa magetsi, rakashongedzwa nezasi-yakakwira-yakamanikidza yekuzvisimbisa yega-yekuisa mukombe-zvakaumbwa zvinhu.
3) Yakasarudzika yemapuraneti kutenderera pombi, yakaparadzaniswa yekuparadzira mafuta pombi, yakashongedzerwa neyakagadzirirwa-monomer mudziyo wekukweva.
4) Akateedzana anotonhodza masisitimu ane yunifomu uye akatsiga mweya shanduko uye wedivi mhepo ichivhuvhuta.
5) Hwendefa rekutungamira rinogona kukwidziridzwa uye kudzikiswa, uye oparesheni yekusimudza musoro iri nyore.
6) Yakakwira-inomhanya otomatiki switching winder ine chaiyo ichitenderera, yakakwira switching yekubudirira, yakanakisa sirika keke inoumba, uye yakanaka kusunungura kuita. Uya nezvimwe sarudzo uye mabhenefiti akanaka kune vashandisi.
Tarisa pane akakwirira-ekukura maseketi mune yepashure-denda nguva
Mushure mekorona nyowani yemabayo denda, kuziva kwevanhu nezve hutano kuchengetedzwa kwawedzera, uye antibacterial, antiviral, anoshanda uye emitambo-anoenderana machira uye matekinoroji achaunza yakakura kukura maitiro. Iko kudikanwa kwezvinhu zvinorwisa denda senge mamask uye zvipfeko zvekudzivirira zviri kuwedzera. Mazhinji marudzi epasi rose akavhurawo zvigadzirwa zvine anti-denda pfungwa. Suzhou Jinwei Chemical Fiber Equipment Co, Ltd. yakaunzawo nguva yekuvandudza zvigadzirwa uye yakagadziriswa spunbond isina-yakarukwa mitsara yekugadzira muminda yekurapa uye yehutsanana.
Njere utsanzi, "kuhwina" kubatanidza kune ramangwana
Kuratidzwa kwezvigadzirwa zvitsva inyaya yakakosha pakuratidzira kwese. Vezera ravo muindastiri vari kufambira mberi mumakwikwi uye kusimudzira kusimudzira mune hunyanzvi. Jinwei vanhu vagara vaine mweya unozvininipisa uye wakazvipira uye nehunyanzvi mweya, uye vakazvipira kuenderera nekusundira iwo akakodzera kwazvo makemikari fiber akazara seti yemidziyo yevashandisi pasi, uye panguva imwechete vachishumira vatengi Gadzira yakawedzera kukosha uye kupa vashandisi neruzivo rwekupedzisira. Kubudikidza nechinhu chigadzirwa, hunyanzvi hwetekinoroji, manejimendi ekuvandudza, uye hutsika hwetsika, kambani inogona kupedzisira yave kambani inotungamira muindasitiri.
Pe Pp Wood -Purasitiki Yekunze Kuwedzera, PC Hollow Sheet Kuwedzeredzwa, PC Sheet Kuwedzeredzwa, PVC Multi Rukoko Heat Insulation Corrugated Board, Kunze Kunyorera, PVC Corrugated Bhodhi,